३३ किलो सुन प्रकरण : काठमाडौंबाट गएका २५ वकिलको बहस सकियो, अब के हुन्छ? :: BIZMANDU
३३ किलो सुन प्रकरण : काठमाडौंबाट गएका २५ वकिलको बहस सकियो, अब के हुन्छ?
प्रकाशित मिति: May 16, 2018 4:57 PM
काठमाडौं। साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्यको हत्यामा पक्राउ परेका अभियुक्तको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सहित २५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
३३ किलो सुन प्रकरण : काठमाडौंबाट गएका २५ वकिलको बहस सकियो, अब के हुन्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।